सशांकलाई प्रकाशमानको प्रश्नः काठमाडौंबाहिर चिन्दैनन् भन्ने ? « रिपोर्टर्स नेपाल
सशांकलाई प्रकाशमानको प्रश्नः काठमाडौंबाहिर चिन्दैनन् भन्ने ?
विराटनगर, १ मंसिर । नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता प्रकाशमान सिंहले आफूलाई काठमाडौं बाहिर चिन्दैन भन्नेलाई चुनाव जितेर देखाउने चुनौती दिएका छन् । आज विराटनगर पुगेर महामन्त्री डा. सशांक कोइरालातर्फ इंकित गर्दै आफूलाई काठमाडौं भित्र र बाहिर दुवैबाट ठूलो साथ मिल्ने गरेको बताए ।
‘हिजो मलाई काठमाडौंले चिन्दैन भन्थे, अहिले काठमाडौबाहिरले चिन्दैन भनी दुष्प्रचार गर्न थालेका छन्,’ सिंहले कोइराला परिवारको गृहजिल्ला मोरङ पुगेर भने,‘देशभरको काँग्रेसको साथबाट सभापति जित्नेछु ।’
आफूले विगतमा केन्द्रीय सदस्य र महामन्त्री हुँदा प्राप्त गरेको मत काठमाडौंको मात्र नभएको स्मरण गराए । उनले भने,‘सबै चुनावमा देखिनेछ ।’
आफू काँग्रेसको तल्लो इकाईबाट लामो संघर्ष गरेर यहाँसम्म आएको सुनाए । उनले आफू जिल्ला कमिटी हुँदै जिल्ला सदस्य, केन्द्रीय सदस्य, उपसभापति, महामन्त्री समेत भएको बताए । अब कुनै हालतमा सभापतिको उम्मेदवारीबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।
आफू कुनै जिम्मेवारीमा नबस्ने र जिम्मेवारी समेत राम्ररी पूरा नगर्नेेहरुले पृष्ठभूमी केलाउन चुनौती दिए । सशांक कोइरालातर्फ इंकित गर्दै भने,‘म महामन्त्री हुँदा काँग्रेस पहिलो पार्टी भएको इतिहास पल्टाए हुन्छ ।’
मुख्यमन्त्री पोखरेल र प्रधानसेनापति भेटवार्ता सम्पन्न, मुलुकको शान्ति सुरक्षा र समसामयिक विषयमा छलफल
गण्डकी, १३ मङ्सिर: गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माका बीच आइतबार